झमक घिमिरेको जीवनमा आधारित फिल्म ‘जीवन काँडा की फूल’को ट्रेलर सार्वजनिक (ट्रेलर सहित) - VOICE OF NEPAL
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार ०७:०६
384 ??? ???????
चलचित्र ‘जीवन काँडा कि फूल’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा मङ्गलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्माण पक्षले चलचित्रको ट्रेलर र सिनेमाघरमा आउँने मिति सार्वजनिक गरेको हो । चलचित्र सिनेमाघरमा कार्तिक २२ गते आउने घोषणा गरिएको छ । हेर्नुस ट्रेलर यस्तो बनेको छ ।